2 toddobaadyada qiyamka Latin Ameerika qiimaha wadashaqeynta - Geofumadas
Isbuucyada 2 ee wada-shaqeynta khadka map Latin America
Febraayo, 2016 cadastre, Geospatial - GIS
Waxay ahayd shan iyo toban maalmood oo cad oo muujinaya sida aamusnaanta GIS ee Latin America ay ugu xiran tahay, macnaha guud ee wadashaqeynta macluumaadka iyo teknolojiyadda isgaarsiinta ay hadda oggol tahay.
Kani waa mashruuc ay soo saartay machadka Lincoln, iyadoo maalmo badan sigaar lagu cabo iyo kafee ay saaxiibo yihiin Diego Erba, Mario Piumetto iyo Sergio Sosa, kuwaas oo aan tixgelinaynin kaliya inay qabtaan shaqo cilmi baaris oo ku saabsan dhaqanka akhlaaqda. qiimaha dhulka ee Latin America, laakiin sidoo kale riix caafimaadka wada noolaanshaha deegaanka. Sidaas darteed, waxay dusha uga saaraan khariidad GIScloud oo ay tabaruceyaashu ku biirin karaan aqoonta ay u leeyihiin duruufahooda.
Natiijooyinka ayaa ka xiiso badan, marka aad leedahay ugu yaraan maalmo 15 ah oo iskaashi ah:
Tabarucayaasha 135 waxay muujiyeen inay danaynayaan kaqeybgalka.
Xogta 345 waa la bixiyay.
Macluumaadka ka socda wadamada 15.
Dabcan, tirada isticmaaleyaasha xiiseynaya iskaashiga (135) ma ahan wakiil ka socda kuwa runtii sidaas sameeyey ilaa maanta. Jadwalka soo socdaa wuxuu muujinayaa qadarka tabaruca ee waddanku leeyahay, safka ugu dambeeya wuxuu ka tarjumayaa kuwii loogu talagalay inay ka qaybqaataan. Waxaa jira dalal qaarkood, sida Bolivia, Nicaragua iyo Venezuela oo aan muuqan sababta oo ah weli wax ku biiriyaan.
Xogtaas, ku dhawaad ​​kalabar waxaa laga qaatay dalabyo la daabacay.
Bixinta la daabacay
Bixinta wargalinta iibiyaha
Qiimaynta ama qiimaynta gaarka ah
Ku dhawaad ​​50% qiimayaasha la soo sheegey waxay u dhigmaan guryaha magaalooyinka cabbirkoodu ka yar yahay mitir laba jibaaran 500, haddii aan tixgalinno qiimaha «ilaa 500 m2». Waxaa jira fasallo qaarkood oo laba jibaaraya tirada, maadaama aruurinta xogtu horeyba loo badelay, gaar ahaan "illaa" 1.000 m2 "iyo" min 1.000 illaa 5.000 "taasoo hubaal ah inay dhalisay natiijo aan waxtar lahayn.
Ilaa 500 m2
Ilaa 1.000 m2
Laga bilaabo 500 illaa 2.000 m2
Laga bilaabo 1.000 illaa 5.000 m2
Laga bilaabo 2.000 illaa 10.000 m2
Inbadan oo ka socota 10.000 m2
Ugu dambeyntiina, natiijada xogta waddanku waxay sheegaysaa heerka saamaynta ay ku leeyihiin dhiirrigeliyayaasha mashruuca iyo bogagga internet-ka ee dhiirrigeliyay dadaallada. Argentina waxay taagan tahay, iyadoo xogta 30%, Brazil iyo Honduras ay la jirto tan kale ee 30%, way cadahay inay tani is bedeli doonto maxaa yeelay waxaa jira maalmo 15 ah laakiin waxaan bogaadinaynaa dadaalka kuwa doonayay inaysan kaliya ogaanin waxa ka dhacaya inta kale ee Latin America laakiin sidoo kale iskaashi la sameyso xogta ay ku heli karaan dalkooda.
Kuwa isdiiwaangaliyay oo aan wax ku biirin, fiiri in ay fududahay: waa inaad kaliya raadisaa bogga guryaha ee magaaladaada oo aad raadsatid guryaha leh meel juquraafi ahaan ku yaal GoogleEarth, ama sawir sahlan oo lagu garto ; wax keliya oo yaqaan waddankaaga ayaa ku qaban kara ficil ahaan.
Natiijooyinka horudhaca ah, waa inaan aqoonsanaa kartida GISCloud, oo u oggolaanaysa ma aha oo keliya falanqaynta xogta tabular sida kuwa aan ku soo koobay shaxdan, laakiin sidoo kale falanqaynta xayeysiinta iyo xoogaa xiiso leh.
Khariidadda ayaa looga dhejin karaa sida lakabka WMS cinwaanka:
Halkan waxaad ka arki kartaa horumarka khariidadda.
Waxaan bogaadineynaa dadaalka, kaas oo runtii ka fikiri doona istiraatiijiyad lagu sii wado quudinta mar alla markii shatiyada tijaabada ee GISCloud ay dhacdo. Waxaa laga yaabaa in hab ficil ah ay u noqon karto adeegga Google iyo waraaqihiisa elektiroonigga ah, ama wax la mid ah, maadaama macluumaadka laga soo ururiyey marxaladdan uusan ahayn mid u taagan ujeeddooyin la isku afgartay.
Ka eeg khariidada GISCloud
Post Previous«Previous Galitaanka Oracle Spatial ee BentleyMap
Post Next BIM - Dunida oo ku riyootay 20 sano ka horNext »